शिक्षामा वर्गीय पर्खाल -
E Naya Khabar Reporter २०७६ कात्तिक २८ गते बिहीवार	| विचार ब्लग, शिक्षा
वहालवाला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षामा नीजि लगानीले वर्गीय विषमता बढाउदै लगेको कुरा कटु यथार्थ हो’ लेख्नु भएको छ । (स्रोतः राष्ट्रियता, पहिचान र सामाजिक रुपान्तरण एक अर्थ–राजनीतिक बहस पृष्ठ, ४६) पछिल्लो तीस वर्षको कालखण्डमा शिक्षामा वर्गीय पर्खाल प्रस्टसँग उभ्याइएको छ ।
यसले वर्लिनको पर्खालको झैं काम गरेको छ, जहाँ दुईवटा दुनियाँको सीमाहरु आएर टुङ्गिन्छ र सीमा रेखाकंन गरिएको हुन्छ । कुन घरको के आर्थिक हैसियत छ भन्ने त उक्त घरको विद्यार्थी कुन विद्यालयमा पढ्छन्, त्यो हेरे पुगिहाल्छ । छरछिमेकमा व्यक्तिको आर्थिक हैसियत कुन विद्यालयमा भर्ना भयो त्यसले प्रस्ट मात्रै देखाएन बरु अचेल त बोर्डिङमा केटाकेटी पढाउनु भनेको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्न गएको छ । यस्तो हँुदा अहिले समाजमा सक्नेले मात्रै होइन, नसक्नेले पनि ऋण काढेर भएपनि आफ्ना साना नानीहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने होडबाजी चलिरहेको छ ।
केही वर्ष पहिले मेरो एकजना साथीले,‘एउटा बच्चा जन्मिनु भनेको जन्मिने बित्तिकै दश लाख ऋण लाग्नु हो’ भनेकी थिइन् । केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको मलेपको प्रतिवेदनले जनाए अनुसार प्रतिव्यक्ति ३१ हजार ऋण त यसको सामु ठूलो कुरा होइन । मैले सविस्तारमा भन्न भनेपछि उनले, ‘शिक्षा यति धेरै महङ्गो छ कि बच्चा ३–४ वर्षको हुने बित्तिकै नर्सरीमा भर्ना गर्नु प¥यो, त्यसपछि शुरु भइगोनि फिस तिर्दा तिर्दा हैरान बनाउँछ’ भनिन् । एकजना मेरो मित्रले एकदिन भने, ‘छोरीलाई एउटा विद्यालयमा भर्ना गरेर आएको साँढे तीन लाख लाग्यो ।’
संस्थागत विद्यालयको आकर्षण
नेपालमा २० प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढिरहेको पछिल्लो तथ्यांकले बताउँछ । सरकारी विद्यालय ‘मल्टि अग्र्यान फेलर’ भएर रोगग्रस्त हुदा संस्थागत विद्यालयले धानेको हिस्सा निकै प्रशसांयोग्य छ । यसर्थ नीजि विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । यस विद्यालयको मुख्य आकर्षण नै अग्रेंजी माध्यममा पठन–पाठन गराउनु हो । यो भाषा औपनिवेशिक कालीन साम्राज्यवादी भएकोले गोराले भूगोलको मात्रै उपनिवेश बनाइएन । ‘इन्भेडरस् गन इन्भेजन इज स्टिल इन माइन्ड’ भने जस्तै, गोराहरुले हाम्रा मन–मस्तिष्कलाई कसरी औपनिवेशिकरण गरेको थियो ? त्यसैले साम्राज्यवादी गए पनि उनीहरुका भाषा, संस्कृति र प्रभाव झन गहिरोसँग गढिएर अझै बसेको छ । यो तथ्य हाम्रो भन्दा भारतको हकमा बढी लागु हुन्छ । त्यहाँ लामोकालसम्म गोराहरुले शासन चलाएकोले अग्रेंजी जान्नु र बोल्नु प्रतिष्ठामात्रै नभएर ठूलो हुनुको प्रतीक मान्ने गरिन्छ । अर्को कुरा जब जङ्ग बहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरे, त्यहीबाट नेपालमा अग्रेंजी मोह शुरु भएको मानिन्छ । उनले त अग्रेंजी शिक्षकहरु ल्याएर नै दरवार हाई स्कुलमा पढाउन लगाए । यसरी नेपालमा शासकहरु निर्मित र भारतबाट आयातित मानसिकताको यति गहिरो प्रभाव छ कि अवचेतन मनमा जरा गाढेर बसेको छ । त्यही आधारमा टेक्दै नेपालमा संस्थागत विद्यालयले शिक्षामा व्यापक प्रभाव जमाउदै गइरहेको छ । अहिले नेपालमा अग्रेंजी भाषाको दूत नै नीजि विद्यालय भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक अग्रेंजी भाषामा दिइने शिक्षालाई मानिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अग्रेंजीकरणको लहरले तीव्रता पाइरहेको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले त यसैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सूचक मानिएको जस्तो बुझिन्छ । जबकि यसका सूचकहरु अरु धेरै नै पक्ष छन् ।
खस्कदो सार्वजनिक विद्यालय
हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु बिग्रनुमा एउटै मात्र कारण छैन । जुनसुकै कारणले बिग्रे पनि त्यसको मूल्य त हामीले चुकाउनै परेको छ । सरकारका मातहतका विद्यालयहरु कतिपय अपवादबाहेक यसरी बिग्रदै गयो कि अब बिग्रनलाई बाँकी ठाउँ नै रहेन । यी विद्यालयहरुको तहस नहसले हाम्रा केटाकेटीका सुन्दर भविष्य पनि धरापमा परेको छ । यो संकेत पटक्कै मुलुकको लागि राम्रो मान्न सकिन्न । त्यसकारणले देश बनाउन चाहनेले अब विद्यालय बनाउन थाल्नु पर्छ । विद्यालय बनाउन नसक्नेले देश बनाउँछ भन्ने पत्याउनु हुन्न । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टीका भट्टराईले गर्नुभएको २०६१–२०७१ सम्मको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा १०० जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा जम्मा १४ जनाले मात्रै एस.एल.सी.पार गरेको देखिन्छ । बाँकी ८६ जना बीचैमा हराई सकेका हुन्छन् । यी विद्यार्थीहरु किन हराए त्यसको लेखाजोखा नीति निर्माण तहमा त्यति छलफलको प्रस्ताव बन्न नसक्नु नै हाम्रो सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु अधोगतिका उदाहरण हुन् ।
यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपालको शिक्षामा राजनीति हावी छ । हिजो पञ्चायतकालमा विद्यालय क्षेत्र नै नेताहरुको आश्रयस्थलको अखडा थियो । विद्यालयहरुले त्यसबेला एक प्रकारले राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रको भूमिका निर्वाह गरे । नेताहरुले विद्यालय क्षेत्रलाई सुरक्षित स्थलको रुपमा पाउन थाले पछि सबै त्यही संरचनामा प्रवेश गर्न थाले । पञ्चायत र राजतन्त्रको विरुद्धमा जनमत र जनशक्ति तयार गर्ने केन्द्रको भूमिकामा विद्यालयहरु लैस हुदै जादा व्यवस्था त ढल्यो, त्यो सँगसँगै आफै पनि जीर्ण हुन पुगे नेपालका विद्यालयहरु । हाम्रा अहिलेका प्रायः माथिल्लो स्तरका सबै नेताहरु हिजोका शिक्षक थिए । पढाउने स्थल आन्दोलनको उर्वर भूमि त भयो तर अहिले बञ्जर भूमिमा परिणत हुदैछ । केही समय अगाडि हरिहरपुरगढी गाँउपालिकाको प्रथम शिक्षा परामर्श सभामा जाँदा विद्यार्थी अभिभावक महासघंको दुईजना साथीहरुसित भेट भयो । वार्तालापको क्रममा एकजना साथीले आफू प्रदेश नम्बर दुईको इन्चार्ज भएको बताए । उनले आफनो नीजगढमा बोर्डिङ स्कुल रहेको खुलासा गरे । नीजि विद्यालयको मालिक सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी अभिभावक महासघंको नेतृत्व गरेको थाहा पाउदा मलाई ‘छक्का पञ्जा तीन’ चलचित्र याद आयो । त्यस चलचित्रमा देखाइएको सार्वजनिक विद्यालयको कब्जा गरेर कसरी नीजि विद्यालय फस्टाइरहेको दृश्य मेरो नयनमा नाचिरह्यो । नैतिक रुपमा यो पत्याउन गाह्रो पर्छ कि जसले बोर्डिङ विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले हाम्रा सार्वजनिक शिक्षा सुधार्छ ? आज यस प्रकारको साजिस राजनीति यो मुलुकमा चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा बनाउने राजनीति भन्दा बिगार्ने राजनीति हावी भएकोले हाम्रा सार्वजनिक शिक्षा ह्रासोन्मुख हुन अभिशप्त छ ।
सामूहिकता भर्सेज नीजित्व
सार्वजनिक शिक्षा र बोर्डिङ शिक्षाबीच पछिल्लो ३ दशकको चित्र फर्केर हेर्दा विषय अझ प्रस्ट होला । डा.रोशनराज बरालले एकदिन मलाई बताउदै थिए,‘हामीले पहिले ललितपुरमा पढाउने विद्यालयका साथीहरु धेरै वर्षपछि एउटा भेटघाट कार्यक्रम भयो । सबैको निष्कर्ष के रह्यो भने हामीले पढाएका विद्यालय जहाँको तहि छ तर हामी सबैको व्यक्तिगत जीवनमा प्रगति भएछ । योग्यता पनि सबैले बढाएछन्, थोरै कमाउने सबैले तुलनात्मक धेरै कमाउने भएछन् । सबैको उन्नति प्रगति सन्तोषजनक नै देखियो ।’ अर्को, बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुसँगै नेपालमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, भृकुटि कागज कारखाना लगायतका राष्ट्रिय उद्योगहरु बन्द भए । यो बीचमा कति नीजि कारखाना, उद्योगहरु स्थापना भए यसको तथ्यांक र विश्लेषण गर्ने हो भने गज्जबको चित्र हाम्रो सामु देखा पर्छ । सारमा यसले के जनाउँछ भने नेपाली समाजमा सामूहिकताको असफलता, ह्रास र हार र नीजित्वको सफलता, प्रगति र ग्राफ चढ्दो छ । यही लाक्षणिकता नेपालको सार्वजनिक र संस्थागत शिक्षामा सशक्त रुपमा प्रतिविम्वित भएको पाइन्छ ।
समाजमा वर्ग चिन्न अहिले सबैभन्दा सजिलो त्यो घरको बच्चा कुन र कस्तो विद्यालयमा पढ्न जान्छन्, त्यो हेरे पुगि हाल्छ । सार्वजनिक र संस्थागत शिक्षाको बीचमा वर्गीय पर्खाल ठड्याइएको छ । यो पर्खाल अझ अग्लिदै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन । असमान शिक्षा र विद्यालयबाट हुर्केको बीचमा समान प्रतिस्पर्धा कतिको न्यायोचित होला ? जतिबेला संसदमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक–२०७५ छलफलमा थियो, एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिन मौका पाएको थिएँ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्य श्याम श्रेष्ठले नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेकोले अब नाफारहित र सेवामूलक बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदा रमेश सिलवाल, जो नीजि विद्यालयको एकजना सम्राटले त्यसलाई चुनौति दिएर सविंधानको बर्खिलाप अभिव्यक्ति दियो । अहिले नीजि विद्यालय केवल विद्यालय मात्रै होइन, यो त शक्तिकेन्द्रको रुपमा परिणत भएको छ । नीजि विद्यालय कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा बुझ्न करिब दुई करोड खर्च गरेर निकै बौद्धिक मेहनत र दुखःले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाएको यतिका महिनासम्म सार्वजनिक नहुनु र नगर्नुले प्रस्ट पार्छ । विडम्वना के सम्म भयो भने आयोगका सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन दवाव दिन हस्ताक्षर अभियान चलाउनु परेको दृश्य हाम्रो सामु छ । शिक्षामा उभ्याइएको वर्गीय पर्खाल अग्लिदै जाँदा नेपाली समाजको समस्या गहिरिदै जाने भएकोले यसको विकल्प खोज्न ढिलाई गर्नु हुदैन । कतिपय पूँजीवादी मुुलुकले पनि शिक्षामा नीजिकरणलाई निस्तेज गरेको प्रशस्त दृष्टान्तहरु छन् ।
सविंधानमा समाजवादोन्मुख घोषणा गरेको दलहरु र आफुलाई नेपाल कम्युनिष्ट भन्ने दलको सरकार आफै मतियार भएपछि कसको के चल्छ र ! नेविसघंको पूर्व नेता कुन्दन काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन, अब न्यायालयले के फैसला गर्ने हो ? पर्खनु बाहेक नेपाली जनतासँग अरु विकल्प छैन । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क नेपालको सविंधान र शिक्षा ऐनले सुनिश्चित गरेकोले नेपाली जनता चनाखो र अन्तमा आफनो हकको लागि सडकमा आउनुको विकल्प छैन । किनकि शक्तिकेन्द्रको लबिङले न्याय सम्पादनमा प्रभाव नपर्ला भन्न सकिदैन । शिक्षामा उभ्याइएको वर्लिनको पर्खाल लरोतरो बलले ढलिन्छ भन्न सकिन्न । थोरै बौद्धिक बल उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले के गर्न खोजेको थियो, अहिले आफ्नै प्रतिवेदन अलपत्रमा परेको छ।
352 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - युवा संघ नेपालको एकता प्रक्रिया टुङ्गियो: उदयपुरको संयोजकमा खेम नेपाल
अघिल्लाे - स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा प्रतिबन्धित नेकपा र सिके राउतको जनमत पार्टी पनि प्रतिस्पर्धामा
उदयपुरकि गायिका पूजा सुनुवारको ‘रहर’ सार्वजनिक-भिडियोमा प्रकाश सपूत र वर्षा राउतको रोमान्स!
इनाँखबर सम्वादाता काठमाडौ- चर्चित गायिका पूजा सुनुवारको दोस्रो सांगीतिक एल्बम ‘रहर’ सार्वजनिक...
इ नयाँ खबर संवाददाता उदयपुर बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको...
स्वनाम साथी हरेक वर्गहरुले आफ्नो हित रक्षार्थ पार्टीहरु खडा गर्ने गर्दछन् ।...
–निष्णु थिङ पृष्ठभूमि वहालवाला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षामा नीजि लगानीले वर्गीय...
के हो मार्क्सवाद?जिवनमा कसरी लागु गर्ने?
विश्वभर र नेपालमा पनि केही कट्टर पूँजीवादी वा कम्युनिस्टइतरलाई मार्क्सवादको नाम सुन्नसमेत...